Jonga i-5 ye-Favourite Kate Middleton yethu yokunxiba
Owayesakuba e-BBNaija 2017 Umntu wasekhaya i-TBOSS ngu-uthixokazi obomvu
Another unyaka omnye umntwana wasebukhosini! Iiyure nje ezisi-7 emva kokuzala umntwana wakhe wesi-3 iiDuchess, Kate Middleton uvele ngamanqanaba esibhedlele iSt Mary ukuze abelane ngeendaba ezilungileyo kunye nelinye ilizwe lomntwana kwiRoys. Imele ukuba iyonwabisa; Prince George kwaye Princess Charlotte yiba nomntwana wobhuti ozomgcina ngoku. Ukukhulelwa kuka-Kate Middleton
Umfazi owonwabileyo, wayebonakala emhle ngengubo ebomvu enemikhono emhlophe njengoko wayephethe umntwana wakhe egqunywe ngehempe. Isinxibo kuye kwathiwa sihambelana ngokusondeleyo nale Princess Diana wanxiba emva kokuzala INkosana uHarry kodwa, Sonke siyazi ukuba iKate Middleton yindawo yasebukhosini ngokwendalo.
Uhlobo lokuzala kukaKate Middleton belusoloko luyinto ayijongileyo ngayo yonke into ezintathu zokukhulelwa kwakhe. Icocekile, iyanambitheka kwaye iyiprinta kodwa ngeflagi yanamhlanje ethi ezinye iiroyals zingabikho. Ukumkanikazi wekamva eliqinisekileyo uyazi ukuba angasigcina njani sineswekile kuye ngenxa yokuba inkangeleko yakhe ikhulelwe ihlala imnandi kwaye imibalabala kodwa kuya kufuneka sivume ukuba siyabathanda abo babandakanya amalaphu.
Nantsi imbonakalo yendlela yethu eyithandayo yobudala bukaKate Middleton…
Ifoto yeTyala: Getty.com | Ikhava: Vanityfair.com
Duchess yeCambridge england ukumkanikazi we-england kate middleton isikhulu charles royals Iiroyals ze-england
Ezona Hats zifanelekileyo kwiRoyal Ascot ngo-2019
I-Rave News Digest: UKate Middleton uhlonitshwe nguKumkanikazi, uJohn singleton, u-ISIS + nangakumbi